Golaha wakiillada Puntland oo magcaabay qayb ka mid ah xubnaha guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo magcaabay qayb ka mid ah xubnaha guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa maanta magcaabay afar xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka KMG ah dowladda Puntland
Guled Saalax Barre, Jaamac Xirsi Faarax, Xafso Salaad Maxamed iyo Cabdirisaaq Axmed Siciid ayaa gudoomiyuhu magcaabay. Dastuurka Puntland ayaa dhigaya in baarlamanku magcaabo qayb ka mid ah xubnaha guddigan.
Madaxweynaha Puntland ayaa laga sugayaa inuu asna magcaabo Shan xubnood oo kale, taas oo tirada guddiga ka dhigaysa saggaal. Guddiga ayaa marka la dhamaystiro iska dhex-doorta guddoonkooda dabeedna waxaa codka kalsoonida siiya golaha wakiilladda.
Bishii Juun ayay shaqada wadajir isaga casileen xubnaha guddigii hore oo shaqaynayay ilaa 2016kii, iyagoo sabab uga dhigay arrimo iyaga u gaar ah.
Sannadkii 2013 ayaa guddi noocaan ah oo xilligaas jiray waxay isku dayeen in ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah, waase la joojiyey markii uu yimi walaac la xiriira in dagaal qarxo, hannaanka oo markaas aan la wada qancin darteed.
Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaase guddiga kale magcaabay saddex sano kadib wakhtigaas oo ahayd 2016, laakiin iyaguna ma aysan awoodin in ay doorasho qabtaan in kastoo ay diiwaan-geliyeen ururo siyaasadeed oo cusub.
Maamulka madaxweyne Deni ayaase balanqaaday in ay hirgelin doonaan hannaan doorasho oo qof iyo cod ah sannadaha ugu horeeyaba.
Xildhibaano ka tirsan Puntland iyo ururo siyaasadeed oo boggaadiyay baarlamanka cusub ee Jubbaland
Golaha Shacabka oo dhisay guddi cusub oo ka shaqeyn doono haqab-beelka cunada